क्रिश्चियन डायर "फरेनहाइट" - दिग्गज पुरुषहरु खुशबू
संसारमा साठी अधिक वर्ष को लागि उच्च फैशन को कम्पनी "मसीही डायर" सफलतापूर्वक सञ्चालन र विकास गरिएको छ - शोधन, शान र राम्रो स्वाद को एक पर्यायवाचीशब्दप्रविष्टगर्नुहोस्। आज यो कम्पनी सृष्टिको नयाँ सौन्दर्य सिर्जना गर्ने, थप दुई भन्दा सय कर्मचारीहरु छ। वर्षौंदेखि आफ्नो काम, कम्पनी कृतज्ञ प्रशंसक लाखौं सिर्जना गरेको छ, ब्रान्ड नयाँ उत्पादनहरु गर्न तत्पर र reverently पहिले देखि नै सिर्जना इत्र, कस्मेटिक्स र वस्त्र सम्बन्धी।
ब्रान्ड PARFUMS मसीही डायर 1947 मा सिर्जना गरिएको थियो, र सोही वर्ष को लागि महिला यस दिन लोकप्रिय छ "मिस Dio", दिग्गज खुशबू देखियो। 1985 मा, सार्वजनिक एक भारी सफलता अपेक्षा छ जो "विष", प्रस्तुत गरिएको थियो। यसलाई निकट भविष्यमा, यो सफलता पिटे मात्र होइन, तर दोहोरिने सक्षम छैन भन्ने देखिन्छ। तर 1988 मा, किस्मत थियो जो एक नयाँ पुरुषहरु संरचना, को अत्तर घर "डायर" र पुरुष सुगंध को दुनिया को क्लासिक को एक पौराणिक कथा बन्न।
हामी एक लक्जरी खुशबू मसीही डायर "फरेनहाइट" बारे कुरा गर्दै छन्। यो पक्कै पनि प्रसिद्ध घर को एक उत्कृष्ट नमुना हो। बीस अधिक वर्ष को लागि आफ्नो नाम आफ्नो मनपर्ने गन्ध बाँकी हुँदा संसारभरि मानिसहरू लाखौं को ओठ मा भएको छ। यो सूक्ष्म हरियो hues र असामान्य पुष्प आभा एउटा सजिलो वुडी खुशबू छ। यो सिपालु संरचना प्रसिद्ध perfumer मौरिस रोजर र जीन लुइस Syuzakom द्वारा सिर्जना गरियो।
सबै कहिलेकाहीं मानिस - एक योद्धा। उहाँले कुनै जीवन थियो जो परिस्थिति मा, त्यो सधैं जीवनको परिस्थितिमा माथि उठन गर्न, भाग्य को जटिलता हटाउन मौका पाउनुहुनेछ। अत्तर मसीही डायर "फरेनहाइट" आफ्नो विश्वास र irrepressible ऊर्जा नेतृत्व गर्न सक्षम गर्व जवान एकल मानिसहरूका विश्वास खातिर दुनिया परिवर्तन गर्न तयार छन् जो लागि बनाएको छ, र।
पहिलो तीन महिनामा समाचार सबै बिक्री रेकर्ड भङ्ग पछि, र आज मानिसहरू लाखौं को मनपर्ने स्वाद दृढ धारण संसारमा मानिसहरू लागि पहिलो लाइन सबैभन्दा लोकप्रिय र सबै भन्दा राम्रो-बिक्री सुगंध को दर्जा।
"फरेनहाइट" मसीही डायर को उज्ज्वल र रसदार स्वाद बिस्तारै सुन्दर एक कोमल र ताजा ठंडक संग उर्लंदो ज्वालामुखी को असह्य गर्मी संयोजन, एक unobtrusive र ताजा टिप्पणीहरू तिर सार्दा छ।
को संरचना को शीर्ष टिप्पणीहरू - Calabrian bergamot, भव्य Honeysuckle को ताजा र सुन्दर महत्तव, chamomile, जायफल, लैवेंडर, कागति, सुन्तले रङ र देवदार रेखांकित जो सख्त नागफनी।
अत्तर मसीही डायर "फरेनहाइट" यसको आफ्नै शैली र फैशनेबल छ। violets, carnations र ओखर को बेसी योग्य faceted सूक्ष्म aromas को चमेली र लिली को अद्वितीय संयोजन। क्रिश्चियन डायर "फरेनहाइट" - एक संरचना एक स्टाइलिश र स्पोर्टी मानिसहरू लागि। सुगंध अत्यन्तै प्रतिरोधी छ र सबै परिस्थितिमा दैनिक प्रयोग आदर्श छ।
"फरेनहाइट 32" - 2007 मा, "डायर" एउटा नयाँ गीत, मूल विपरीत नाटकीय जारी गरेको छ। यो एउटा वास्तविक ताजगी आड ठण्डा छ प्राच्य ढाँचा।
2009 मा, अत्तर घर "डायर" यसको अद्यावधिक संस्करण मसीही डायर जारी गरेको छ "फरेनहाइट निरपेक्ष"। यस साहसी र शक्तिशाली स्वाद को लेखक प्रसिद्ध François Demanshi थियो। यो खुशबू टिप्पणीहरू लागि प्रतीकात्मक आधारमा संरचना प्रसिद्ध perfumer द्वारा सिर्जना, - छाला र बैंगनी पात। , Myrrh frankincense रूख Oud - छाला संग सम्पर्क मा दुर्लभ जंगल र रेजिन आफ्नो धन प्रकट गर्छ।
लामखुट्टे बाट बक्र - बाहिर रगत-चूसने कीराहरू विरुद्ध लड्न सबै भन्दा राम्रो तरिका
नीलो र खैरो आँखा लागि टिन्टिङ लेंस
भित्री ढोका लागि latches (चुम्बकीय) - प्रत्येक मास्टर लागि सही विकल्प!
Humidifier: यो के हो, दृश्य र समीक्षा
सुशील प्रकाश: एक घर आरामदायक र स्टाइलिश बनाउन कसरी?
एचआईभी र hepatitis सी मा भाइरल लोड: प्रदर्शन
शुद्धतालाई मा धब्बा: नियमहरूमा के हुन्
Chingiz Aitmatov, "प्रारम्भिक क्रेन": सारांश
खैरो चामल एक अद्वितीय उत्पादन हुन मानिन्छ किन
सबैभन्दा राम्रो र सबैभन्दा शक्तिशाली पिस्टलहरू न्यूनमैटिक्स हुन्
"Kadarka" - साँचो connoisseurs का लागि रक्सी
राजाको लागि एक नुस्खा - लंचनको साथको शुचिच प्रमुख
हाइड्रोजन - सामान के? रासायनिक र हाइड्रोजन को शारीरिक गुण
भान्सा मा विन्डो सजावट - एक रोचक र रोमाञ्चक अनुभव
अज्ञात नाम - Makarov Evgeniy Kirillovich